Nzacha HTC Ville C, nsụgharị akụ na ụba nke HTC One S | Gam akporosis
Mgbe oru nke HTC One S na HTC One X Gaghị agbaghara ụfọdụ HTC nlereanya, na niile ọhụrụ, ma dị ọnụ ala? Mkpirisi ekwentị O tinyela anyị na egwu nke ọnụ na-aza profaịlụ a, na nzacha nke onyonyo yana nkọwa nke ama ọhụụ sitere na ụlọ HTC, n'ezie, ya na gam akporo na afọ ya, akpọ (maka ugbu a) Owuwe ihe ubi C.
Ọ dị ka ọ bụ onodu aku na uba nke HTC One S, nke na-eme ka uche zuru oke n'ụwa, nyere ya na aha njirimara n'oge mmepe ime nke HTC One bụ «Ville». A na-eche na 'C' na-ezo aka na 'dị ọnụ ala', ya bụ, dị ọnụ ala. Otú ọ dị, anyị chere na mgbe ọ na-ere ya, ọ ga-ewere aha azụmahịa karịa, na-etinye onwe ya na usoro HTC One.
Ya mere, na ị na-adịghị ahapụ anya gị na mmasị image, anyị na-enyocha ihe atụmatụ nke ama a:
Ihuenyo 4.3-inch, qHD AMOLED.
16GB nke nchekwa dị n'ime.
1.2GHz Qualcomm sọrọ-isi MSM8260 S3 processor (leaked mpempe akwụkwọ na-ekwu 1.7GHz, ma BriefMobile isi iyi na-ekwu na nke a bụ a typo)
Ultra ebughibu profaịlụ (kpọmkwem akụkụ amabeghị).
Sense 4.5 interface (ya mere, anyị nwere ike ijide n'aka na HTC na-emecha nyocha nke HTC Sense 4.0)
Akara 4.0 Ice Cream Sanwichi
8MP n'azụ igwefoto, na otu ngwa anya dị ka ndị HTC One usoro, gụnyere 1080p video ndekọ.
Igwefoto n’iru maka nzukọ ọgbakọ VGA.
1.650 mAh batrị.
Ọ bụrụ na emesịa mepụta ya na asọmpi asọmpi yana ogo nke ihe eji eme na-eso ụzọ nke usoro ahụ setịpụrụ, anyị nwere ike ihu a kacha ere nke ahụ na-ewelite nsonaazụ nke HTC?
Ozi ndị ọzọ - HTC One, na-esote HTC ama zuru ezu, Ihe oyiyi ọhụrụ nke HTC Ville
Isi mmalite - Mkpirisi ekwentị
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » HTC » New HTC Ville C, ụdị akụ na ụba nke Onye S
Julaị MASMOVIL dijo
Ihe dị mma nke HTC, nke dị n'ụdị Nokia n'oge ọ dị ugbu a na-enye anyị katalọgụ nke ukwuu na ihe ọ na-emepụta bụ njirimara na ika ahụ, ebe anyị hụrụ ngalaba ọnụahịa niile.
Zaghachi Julio MASMOVIL
Obere okwute, ọdịnihu bi na nkwojiaka gị